Ịdị n'otu nke Onwe - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Ịdị n'otu
Nsogbu na Otu Ozizi - Modalism
A na -agụ Jizọs na Nna ọnụ dị ka ndị akaebe abụọ
Ọpụrụiche doro anya dị n'etiti onye Chineke na Jizọs bụ
Ọdịiche Ndị Na -adịkarị n'Agba Ọhụrụ
Ọdịiche anya n'etiti Chineke na Jizọs
Modalism na -arụpụta abụọ n'ime Jizọs
Jizọs mere dịka atụmatụ Chineke si dị (ọ bụghị nke ya) dị ka odibo
Chineke buliri / họpụta Jizọs
Otu ndi ozi siri mata Jisos
Mesaịa nke amụma bụ onye nnọchiteanya nke Chineke
Jizọs na -ekwu maka ekpere ndịozi maka ike
Omume dị mkpa nke Kraịst
Kedụ ka Jizọs si bụrụ Chukwu na -abụghị Chineke n'echiche nke ọnụnọ?
Kedu maka Jọn 14: 9 na amaokwu ndị ọzọ dị na Jọn?
Ọ bụ na Jizọs emeghị ka a mata onwe ya dị ka Chineke site n'ịsị "Abụ m" (ego eimi)
Jizọs bụ Okwu ahụ (Logos) mere anụ ahụ - nke a ọ́ naghị egosi na ya na Chineke bụ otu?
Yabụ kedu nghọta ziri ezi gbasara Chineke na Jizọs?
Ajụjụ siri ike maka ndị Modalist
Site n'ịdị n'otu ruo n'ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ
Ihe enyemaka ndị ọzọ na -agbagha ozizi ịdị n'otu (modalism)
N'ebe a, anyị ga -edepụta nsogbu dị na ozizi ịdị n'otu gụnyere isi amaokwu Akwụkwọ Nsọ. Agbanyeghị na enwere ihe karịrị 760 NT nke na -egosipụta ọdịiche dị n'etiti Chineke na Jizọs, anyị ga -elekwasị anya na amaokwu kacha sie ike na -ekpuchi Jizọs na Nna ịbụ ndị akaebe dị iche, ọdịiche doro anya n'etiti onye nke Chineke na Jizọs, ọdịiche dị na New. Agba, na amaokwu ndị na -egosi ọdịiche anya. N'ịga n'ihu, anyị ga -eleba anya n'otú Jizọs siri mee dịka atụmatụ Chineke dị ka odibo si dị, nke Chineke buliri/họpụta Jizọs. Isi ihe a ga -ekwu maka ya bụ etu Ndịozi siri mata Jizọs n'akwụkwọ Ọrụ Ndịozi. A na -enye nkọwa maka mkpa ọ dị Mesaịa nke ibu amụma ịbụ onye nnọchi anya Chineke, anyị ga -eleba anya ihe kpatara mmadụ mmadụ Kraịst ji dị mkpa maka Oziọma. A na -ehota amaokwu na English Standard Version (ESV) belụsọ na egosiri ya n'ụzọ ọzọ.
Na Jọn 8:16, Jizọs kwuru na ọ bụghị naanị ya ka ọ na -ekpe ikpe kama “mụ na Nna m nke zitere m”. Ọ dịghị ebe dị n'Agba Ọhụrụ ebe ọdịiche dị n'etiti Onye nke Chineke na nke Jizọs pụtara nke ọma. Nke a bụ n'ihi na n'amaokwu nke 17, Jizọs zoro aka n'Iwu ahụ na -ekwu na "akaebe nke mmadụ abụọ bụ eziokwu." Jizọs na -agụta onwe ya na Nna ya dịka mmadụ abụọ mgbe ọ na -ekwu n'amaokwu 18, "Abụ m onye na -ege ntị maka onwe m, Nna nke zitere m na -agbakwa ama banyere m."
John 8: 16-18, Jizọs na Nna bụ ndị akaebe abụọ
16 Ma ọ bụrụgodi na m ekpee ikpe, ikpe m bụ eziokwu, n'ihi na ọ bụghị naanị m na -ekpe ikpe, kama Mu na Nna Nke ziterem. 17 N'ime iwu gị edewo ya na ịgba akaebe nke mmadụ abụọ bụ eziokwu. 18 Ọ bụ m na -agba ama banyere onwe m, Nna nke zitere m na -agbakwa ama banyere m. "
Amaokwu ndị a na -enye ndịiche dị ike n'etiti Chineke na Jizọs ọ bụghị naanị na -ekwu na ha bụ ndị dị iche mana ha na -enyekwa ihe dị iche n'ihe gbasara ontology (Nna a na -akọwapụta dị ka Chineke nke kachasị ihe niile)
John 8: 42, Mu onwem siri n'ebe Chineke nọ bia, mu onwem nọ kwa - abiaghm n'Onwem, kama Ya onwe -ya ziterem
42 Jizọs sịrị ha, “Ọ bụrụ na Chineke bụ Nna unu, unu gaara ahụ m n'anya M si n'ebe Chineke nọ bịa, m wee nọrọ ebe a. Abịaghị m n’onwe m, kama ọ bụ ya zitere m.
Jọn 8:54, Ọ bụ Nna m na -enye m otuto
Jọn 10: 14-18, Ama m nke m, nke m makwa m, dị nnọọ ka Nna m maara m, mụ onwe m amatakwa Nna m
14 Mu onwem bu onye -ọzùzù -aturu ọma. Ama m nke m, nke m makwa m, 15 dị nnọọ ka Nna m maara m, mụ onwe m amatakwa Nna m; m na -atọgbọkwa ndụ m n'ihi atụrụ. 16 Enwere m atụrụ ọzọ na -anọghị n'ogige atụrụ a. Aghaghị m ịkpọta ha, ha ga -egekwa ntị n'olu m. N'ihi ya, a ga -enwe otu ìgwè atụrụ, otu onye ọzụzụ atụrụ. 17 Ọ bụ ya mere Nna m ji hụ m n'anya, n'ihi na m na -atọgbọ ndụ m ka m weghachi ya ọzọ. 18 Ọ dịghị onye na -anapụ m ya, mana ana m atọgbọ ya n'onwe m. Enwere m ikike ịtọgbọ ya, enwekwara m ikike ibuli ya ọzọ. Iwu a ka m nataworo n'aka Nna m. ”
Jọn 10:29, Nna m karịrị ihe niile
29 Nna m, onye nyere m ha, dị ukwuu karịa ihe niile, ọ dịghịkwa onye pụrụ ịnapụ ha n'aka Nna m.
Jọn 14: 9-12, M na -alakwuru Nna m
9 Jizọs sịrị ya, “Mụ na gị anọwo ogologo oge a, ma ị mabeghị m, Filip? Onye hụrụ m ahụla Nna m. Olee otu ị ga -esi kwuo, 'Gosi anyị Nna ahụ'? 10 You kweghi na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem? Okwu m na -agwa gị anaghị m ekwu n'onwe m, ma Nna nke bi n'ime m na -arụ ọrụ ya. 11 Kwere m na mụ onwe m nọ nʼime Nna m nọkwa nʼime m, ma ọ bụghị ya, kwere nʼihi ọrụ ndị a n'onwe ha. 12 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, onye ọ bụla nke kwere na mụ, ọ ga -arụkwa ọrụ m na -arụ; ọ ga -arụkwa ọrụ karịrị ndị a, n'ihi na M na -alakwuru Nna m.
Jọn 14: 20-24, Anyị ga-abịakwute ya ka anyị na ya biri
20 N’ubọchi ahu unu gāmara na Mu onwem nọ nime Nnam, na unu onwe-unu nọ kwa nimem, na Mu onwem nọ kwa nime unu. 21 Onye ọ bụla nke nwere ihe m nyere n'iwu ma na -edebe ha, ọ bụ ya hụrụ m n'anya. Na onye hụrụ m n'anya ka Nna m ga -ahụ n'anya, m ga -ahụ ya n’anya ma gosi ya onwe m. ” 22 Judas (ọ bụghị Iskarịọt) sịrị ya, “Onyenwe anyị, olee otu ị ga -esi gosi anyị onwe gị, ọ bụghịkwa ụwa?” 23 Jizọs zara ya, sị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ m n'anya, ọ ga -edebe okwu m na nke m Nna ga -ahụ ya n'anya, na we ga -abịakwute ya mee anyị soro ya laa. 24 Onye na -ahụghị m n'anya anaghị edebe okwu m. Na okwu ahụ ị na -anụ abụghị nke m, kama ọ bụ nke Nna zitere m.
Jọn 14:28, TNna ka m ukwuu
28 Ị nụrụ ka m sịrị gị, 'Ana m ala, m ga -abịakwutekwa gị.' Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị gaara aicedụrị ọ ,ụ, n'ihi na M na -alakwuru Nna m, n'ihi na Nna m ka m ukwuu.
John 17: 1-3, gị naanị ezi Chineke na Jizọs Kraịst onye zitere
Na1 Mb Jesuse Jisus kwusiri okwu ndia, O welie anya -Ya le elu -igwe, si, “Nna, oge awa ahụ eruwo; nye Ọkpara gị otuto ka Ọkpara ahụ wee nye gị otuto, 2 ebe I nyere ya ikike n'ebe anụ ahụ niile nọ, inye ndị niile I nyere ya ndụ ebighi ebi. 3 Ma nka bu ndu ebighi -ebi, ka ha mara Gi, Nke nání Gi bu ezi Chineke, mara kwa Onye I zitere, bú Jisus Kraist.
Jọn 20:17, a na m arịgokwuru Chineke m na Chineke gị
17 Jesus ọdọhọ enye ete: “K notyịre mi ke idem, koro Enwetabeghị m gakwuru Nna; ma gakwuru ụmụnne m, sị ha, 'Ana m arịgokwuru Nna m na Nna gị, na Chineke m na Chineke gị'"
1 Ndị Kọrịnt 8: 4-6, Otu Chineke bụ Nna, na otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
"... ọ dịghị Chineke ọ bụla ma ọ bụghị otu." 5 N'ihi na n'agbanyeghị na enwere ike ịkpọ chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa-n'ezie enwere ọtụtụ "chi" na ọtụtụ "ndị nwenụ"- 6 ma maka anyị, e nwere otu Chineke, Nna, n'aka onye ka ihe niile na onye anyị dịịrị maka ya, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst, onye onye ihe nile sitere n'aka ya na onye anyị sitere n'aka ya.
N'echiche siri ike n'ụdị "chi" enwere otu Chineke Nna. N’ọdịiche nke “ndị nwenụ” e nwere otu Onyenwe anyị, Jisọs Kraịst. Chineke mere ya ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst (Ọrụ 2: 36, Phil 2: 8-11)
Ọrụ 2: 36, Chineke emewo ya ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst
36 Ya mere, ka ụlọ Izrel dum mara nke ọma Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst, Jizọs a nke ị kpọgidere n'obe. ”
Ọrụ 3:18, Chineke buru amụma na Kraịst ya ga -ata ahụhụ
18 Ma gịnị Chineke buru amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ, o si otu a mezuo.
Ọrụ 4:26, megide Onyenwe anyị na imegide onye ya e tere mmanụ
26 Ndi -eze nke uwa guzoro onwe -ha, Ndi -isi zukọ -kwa -ra, imegide Onye -nwe -ayi na imegide Onye -Ya etere manu' -
Ndị Filipaị 2: 8-11, Chineke ebuliela ya elu nke ukwuu wee nye ya onyinye
8 Ebe achọtara ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụnadị ọnwụ n'obe. 9 Ya mere, Chineke ebuliela ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, 10 ka ikpere nile we b bowue n'ala n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, iji nye Chineke Nna Nna otuto.
Ndị Galetia 1: 3-5, Jizọs nyere onwe ya dịka uche nke Chineke Nna siri dị
3 Ka amara na udo dịrị gị sitere na Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, 4 Onye nyere onwe ya maka mmehie anyị iji napụta anyị n'ajọ oge a. dika uche nke Chineke na Nna ayi si di, 5 otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
1 Timoti 2: 5-6, Otu Chineke dị na otu onye ogbugbo
Onye ogbugbo bụ onye nọọrọ onwe ya site na Chineke nke ọ na -ekpechite ọnụ ya.
1Kọ 11: 3, isi Kraịst bụ Chineke
3 Mana achọrọ m ka ị ghọta nke ahụ Kraịst bụ isi nke nwoke ọ bụla, isi nke nwunye bụ di ya, na isi nke Kraịst bụ Chineke.
2 Ndị Kọrịnt 1: 2-3, Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
2 Amara diri gi, na udo nke sitere n’aka Chineke, bú Nna-ayi, na nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist. 3 Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ bụ Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, Nna nke obi ebere na Chineke nke nkasi obi niile
Ndị Kọlọsi 1: 3 Chineke, Nna nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst
3 Anyị na -ekele mgbe niile Chineke, Nna nke Onye -nwe -ayi Jisus Kraist, mgbe anyị na -ekpe ekpere maka gị
Ndị Hibru 9:24, Kraịst banyere n'eluigwe ịpụta n'ihu Chineke
24 n'ihi na Kraịst abanyela, ọ bụghị n'ebe nsọ ndị e ji aka mee, bụ́ ihe atụ nke ihe bụ eziokwu, kama banye n'eluigwe n'onwe ya, ugbu a ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị.
Chineke gara n'eluigwe ịpụta n'ihu Chineke?
Mkpughe 11:15, alaeze nke Onyenwe anyị na nke Kraịst ya
15 Mọ -ozi nke -asa we fùa opì -ike, oké olu we di n'elu -igwe, si, Ala -eze elu -igwe aghọwo ihe nāchi. ala -eze nke Onye -nwe -ayi na nke Kraist -Ya, ọ ga -abụkwa eze ruo mgbe niile ebighị ebi. ”
Mkpughe 12:10, alaeze nke Chineke anyị na ikike nke Kraịst ya
10 M wee nụ oké olu n'eluigwe, na -asị, “Ugbu a bụ nzọpụta na ike na ala -eze nke Chineke anyị na ikike nke Kraịst ya n'ihi na a tụdawo onye na -ebo ụmụnna anyị ebubo, onye na -ebo ha ebubo ehihie na abalị n'ihu Chineke anyị.
Mkpughe 20: 6, Ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst
6 Ngọzi na nsọ ka onye ahụ bụ onye na -ekere oke na mbilite n'ọnwụ mbụ! N'ime ụdị ọnwụ nke abụọ a enweghị ike, mana ha ga -adị Ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst, ha ga -eso ya chịa otu puku afọ.
N'ikwu ya n'ụzọ siri ike, e nwere otu Chineke, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịrị maka ya na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst onye ihe niile sitere n'aka ya. (1 Ndị Kọrịnt 8: 6) N'ikwekọ, ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ (15x) na -eji okwu ahụ bụ "Chineke" na -ezo aka na Nna yana okwu "Onyenwe anyị" metụtara Jizọs. Ụdị ahịrịokwu eji ekele Pọl bụ, “Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst”. Amaokwu ndị a gụnyere Ndị Rom 1: 7, Ndị Rom 15: 6, 1 Ndị Kọrịnt 1: 3, 1 Ndị Kọrịnt 8: 6, 2 Ndị Kọrịnt 1: 2-3, 2 Ndị Kọrịnt 11:31, Ndị Galeshia 1: 1-3, Ndị Efesọs 1: 2 -3, Ndị Efesọs 1:17, Ndị Efesọs 5:20, Ndị Efesọs 6:23, Ndị Filipaị 1: 2, Ndị Filipaị 2:11, Ndị Kọlọsi 1: 3, 1 Pita 1: 2-3.
Ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ (15x) na -ekwu na Chineke kpọlitere Jizọs n'ọnwụ, na -egosi ọdịiche dị n'etiti Jizọs onye a kpọlitere na Chineke onye mere ka o si n'ọnwụ bilie. Amaokwu ndị a gụnyere Ọrụ 2:23, Ọrụ 2:32, Ọrụ 3:15, Ọrụ 4:10, Ọrụ 5:30, Ọrụ 10:40, Ọrụ 13:30, Ọrụ 13:37, Ndị Rom 6: 4, Ndị Rom 10 : 9, 1 Ndị Kọrịnt 6:15, 1 Ndị Kọrịnt 15:15, Ndị Galeshia 1: 1, Ndị Kọlọsi 2:12, na 1 Pita 1:21.
Enwere ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ (13x) na -ezo aka na Jizọs nọ “n'aka nri Chineke” na -egosi ọdịiche nke Chineke na Jizọs nọ n'aka nri ya. Amaokwu ndị a gụnyere. Mak 16: 9, Luk 22:69, Ọrụ 2:33, Ọrụ 5:31, Ọrụ 7: 55-56, Ndị Rom 8:34, Ndị Efesọs 1: 17-19, Ndị Kọlọsi 3: 1, Ndị Hibru 1: 3, Ndị Hibru 8: 1, Ndị Hibru 10:12, Ndị Hibru 12: 2, na 1 Pita 3:22. N'ikwekọ, ọ bụ naanị otu Chineke na Nna bụ onye bụ Chineke n'ezie, na Jizọs na-arụchitere Chineke ọrụ dị ka aka nri Chineke.
Ọrụ 7: 55-56, Stivin hụrụ ebube Chineke, hụkwa Jizọs n'aka nri Chineke
55 Ma Ya onwe -ya juputara na Mọ Nsọ, legidere anya n'elu -igwe o we hu ebube Chineke, na Jisus ka Ọ n atguzo n'aka -nri Chineke. 56 O we si, Le, anamahu elu -igwe ka emegheworo, na Nwa nke madu ka Ọ n atguzo n'aka -nri Chineke.
Mkpughe 5: 6-12, nwa atụrụ nọ n'akụkụ ocheeze ahụ, weere akwụkwọ mpịakọta ahụ sitere n'aka Chineke n'ocheeze ahụ
6 N'etiti ocheeze ahụ na ihe anọ ahụ dị ndụ na n'etiti ndị okenye ahụrụ m Nwa Atụrụ ka ọ na -eguzo dịka a ga -asị na e gbuola ya, nke nwere mpi asaa na anya asaa, nke bụ mmụọ asaa nke Chineke zitere n'ime ụwa niile. 7 O wee gaa were akwụkwọ mpịakọta ahụ n'aka nri nke onye ahụ nọ ọdụ n'ocheeze ahụ. 8 Mgbe o were akwụkwọ mpịakọta ahụ, ihe anọ ahụ dị ndụ na ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ dara n'ihu Nwa Atụrụ ahụ, onye ọ bụla na-ejide ụbọ akwara, na iko ọlaedo juru n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, nke bụ ekpere ndị nsọ. 9 Ha we bù abù ọhu, si, I kwesiri ka i were akwukwọ -npiakọta ahu, meghe kwa akàrà -ya; n'ihi na egburu gị, ọ bụkwa site n'ọbara gị ka ị gbapụtara ndị mmadụ maka Chukwu sitere n'ebo niile na asụsụ niile na ndị mmadụ na mba niile, 10 na I mewo ha ka ha bụrụ alaeze na ndị nchụàjà nye Chineke anyị, ha ga -achịkwa ụwa. ”
Mkpughe 7: 15-16, Chineke nọ n'ocheeze-nwa atụrụ ahụ nọ n'etiti ocheeze ahụ
15 “Ya mere, ha nọ n'ihu ocheeze Chineke, jeere ya ozi ehihie na abalị n'ụlọ nsọ ya; onye nọkwa n'ocheeze ga -eji ọnụnọ ya kpuchie ha. 16 Agụụ agaghị agụ ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọ ha nkụ ọzọ; anyanwu agaghi -etib themu ha, ma -ọbu oké ọku. 17 n'ihi na Nwa atụrụ n'etiti ocheeze ahụ ga -abụ onye na -azụ ha, ọ ga -edugakwa ha n'isi iyi mmiri ndụ, Chineke ga -ehichapụkwa anya mmiri niile n'anya ha. "
N'izo aka na Mkpughe 5, Ọ bụrụ na ị sị Nwa Atụrụ (n'etiti ocheeze na ihe anọ ahụ dị ndụ) bụ Jizọs na Chukwu (onye nọ n'ocheeze) bụkwa Jizọs. Mgbe ahụ ihe ga -esi na ya pụta bụ na Jizọs na -ewere akwụkwọ mpịakọta ahụ site n'aka nri Jizọs - abụọ nke Jizọs
Mkpughe 5: 6-12
Matiu 12:18, “Lee odibo m nke m họpụtara”
18 “Lee, ohu m nke m họpụtara, onye m hụrụ n'anya nke ihe ya na -atọ mkpụrụ obi m ụtọ. M ga -etinye mmụọ m n'ahụ ya, ọ g willkwusa kwa mba nile ikpe ziri ezi.
John 4: 34 “Ihe oriri m bụ ka m mee uche nke onye zitere m”
John 5: 30, "Achọghị m uche nke m kama ọ bụ uche onye zitere m"
30 “Enweghị m ike ime ihe ọ bụla n'onwe m. Ka m na -anụ, m na -ekpe ikpe, ikpe m ziri ezi, n'ihi na Achọghị m uche nke m kama uche onye zitere m.
John 7: 16-18, "Ozizi m abụghị nke m, kama ọ bụ nke onye zitere m."
16 Ya mere, Jizọs zara ha, sị:Ozizi m abụghị nke m, kama ọ bụ nke onye zitere m. 17 Ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ime uche Chineke, ọ ga -amara ma ozizi a o sitere na Chineke ka ọ bụ ma m na -ekwu ya n'ike m. 18 Onye na -ekwu okwu n'onwe ya na -achọ otuto nke ya; mana onye na -achọ otuto nke onye zitere ya bụ eziokwu, na ọ dịghị okwu ụgha dị n'ime ya.
John 8: 26-29, Jizọs kwuru dịka Nna siri kuziere ya
6 Enwere m ọtụtụ ihe m ga -ekwu gbasara gị na ọtụtụ ihe m ga -ekpe ikpe, mana onye zitere m bụ eziokwu, m na -ekwusakwa ụwa ihe m nụrụ n'ọnụ ya. " 27 Ha aghọtaghị na ọ na -agwa ha gbasara Nna ya. 28 Ya mere Jisus siri ha, Mb Whene unu weliri Nwa nke madu elu, mb youe ahu ka unu gāmara na Mu onwem bu Ya; Adịghị m eme ihe ọ bụla n'ike aka m, kama kwuo dị ka Nna m ziri m. 29 Onye ziterem nọ kwa. Ọ hapụghị m naanị m, n'ihi na m na -eme ihe na -atọ ya ụtọ mgbe niile. ”
John 12: 49-50, Onye zitere ya enyela ya iwu-ihe ọ ga-ekwu na ihe ọ ga-ekwu
Jọn 14:24, “Okwu ahụ nke ị na -anụ abụghị nke m, kama ọ bụ nke Nna m”
24 Onye na -ahụghị m n'anya anaghị edebe okwu m. Okwu ahụ ị na -anụ abụghị nke m, kama ọ bụ nke Nna m onye zitere m.
John 15: 10, "Edebewo m ihe Nna m nyere n'iwu wee nọrọ n'ịhụnanya ya"
10 Ọ bụrụ na unu edebe iwu m, unu ga -anọgide n'ịhụnanya m, dịka Edebewo m ihe Nna m nyere n'iwu wee nọrọ n'ịhụnanya ya.
Ọrụ 2: 22-24, "Otu onye a raara nye dị ka atụmatụ na ịmara nke Chineke si dị"
22 “Ndị Izrel, nụrụ okwu ndị a: Jizọs onye Nazaret, nwoke nke Chineke gbaara unu akaebe were ọlu di ike na ọlu -ebube na ihe -iriba -ama na Chineke sitere n'aka ya n'etiti unu, dịka unu maara - 23 Jizọs a, nke a raara nye dị ka atụmatụ na amamihe Chineke siri dị, site n'aka ndị na -emebi iwu ka ị kpọgidere n'obe ma gbuo gị. 24 Chineke kpọlitere ya, na -atọpụ ihe ụfụ nke ọnwụ, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ijide ya.
Ọrụ 3:26, “Chineke mere ka ohu ya bilie”
26 Chineke, ebe O mere ka odibo Ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya, ka ọ gọzie gị site n'ịchụpụ onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
1 Pita 2:23, O nyefere onwe ya n'aka onye na -ekpe ikpe ziri ezi
23 Mgbe a na -ekwujọ ya, ọ dịghị ekwujọgwara; mgbe ọ na -ata ahụhụ, o yighị egwu, kama ọ nọgidere na -enyefe onwe ya n'aka onye na -ekpe ikpe ziri ezi.
3 Amara na udo si n'aka Chineke bụ Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, 4 Onye nyere onwe ya maka mmehie anyị iji napụta anyị n'ajọ oge a. dika uche nke Chineke na Nna ayi si di, 5 otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Ndị Filipaị 2: 8-11, O wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ
8 Ebe achọtara ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụnadị ọnwụ n'obe. 9 Ya mere Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu ma nyekwa ya aha dị elu karịa aha ọ bụla, 10 ka ikpere nile we b bowue n'ala n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jisus Kraịst bụ Onye -nwe, iji nye Chineke Nna otuto.
Ọrụ Ndịozi 10:42, ọ bụ ya bụ onye Chineke họpụtara ịbụ onye ikpe
42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama nke ahụ ọ bụ onye ahụ Chineke họpụtara ikpe onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ ikpe.
1 Ndị Kọrịnt 15: 24-27, Chineke edobela ihe niile n'okpuru ụkwụ ya
24 Mgbe ahụkwa ka ọgwụgwụ ga -abịa, mgbe ọ ga -enyefe alaeze ahụ n'aka Chineke Nna mgbe o bibisịrị ọchịchị niile na ikike niile na ike niile. 25 N'ihi na ọ ga -abụrịrị eze ruo mgbe o debere ndị iro ya niile n'okpuru ụkwụ ya. 26 Onye iro ikpeazụ a ga -ebibi bụ ọnwụ. 27 n'ihi na "Chineke edowo ihe nile n'okpuru ukwu Ya. ” Ma mgbe ọ sịrị, “edobere ihe niile n'okpuru,” ọ pụtara nke ọma Ọ gwụla ma onye debere ihe niile n'okpuru ya.
Ndị Efesọs 1: 17-21, Chineke kpọlitere ya wee mee ka ọ nọdụ ala n'aka nri ya n'ebe ndị dị n'eluigwe
17 na Chineke nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Nna nke ebube, nwere ike nye gị Mmụọ amamihe na nke mkpughe n'ịmara ya, 18 ebe enwetara anya nke obi unu, ka unu wee mara ihe bụ olile anya nke ọ kpọrọ unu, gịnị bụ akụ nke ihe nketa ya dị ebube n'ime ndị nsọ, 19 na ihe bụ ịdị ukwuu na -enweghị atụ nke ike ya n'ebe anyị bụ ndị kwere, dị ka ịrụ ọrụ nke nnukwu ike ya siri dị 20 na ọ rụrụ ọrụ n'ime Kraịst mgbe Ọ kpọlitere ya site na ndị nwụrụ anwụ wee mee ka ọ nọdụ ala n'aka nri ya n'ebe ndị dị n'eluigwe, 21 dị elu karịa ọchịchị niile na ikike na ike na ịchịisi, na karịa aha niile akpọrọ, ọ bụghị naanị n'oge a kamakwa na nke na -abịa. Ndị Efesọs. 22 O wee debe ihe niile n'okpuru ụkwụ ya wee nye ya dika isi ihe nile nye nzukọ -nsọ, 23 nke bụ ahụ ya, njupụta nke onye ahụ na -emeju ihe niile n'ime ihe niile.
Ndị Filipaị 2: 8-11, Jizọs buliri elu n'ihi nrubeisi ya
8 Ebe achọputara ya na udi nke madu, o wedara onwe ya ala site na nrube isi rue onwu, obuna onwu n’elu obe. 9 Ya mere, Chineke ebuliela ya elu nke ukwuu wee nye ya aha dị elu karịa aha niile, 10 ka ikpere nile we b bowue n'ala n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jisus Kraịst bụ Onye -nwe, iji nye Chineke Nna otuto.
Ndị Hibru 1: 9 Chineke, Chineke gị, etewo gị mmanụ
9 Afo amama edinen ido onyụn̄ asua idiọkido; ya mere, Chineke, Chineke gị, etewo gị mmanụ jiri mmanụ ọ gladụ gafere ndị ibe gị. ”
Ndị Hibru 2: 5-8, Chineke buliri onye dị ala karịa ndị mmụọ ozi
5 N'ihi na ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro n'okpuru ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya. 6 A na -agba akaebe ebe, "Gịnị bụ mmadụ, na ị na -echeta ya, ma ọ bụ nwa nke mmadụ, ka i wee lekọta ya? 7 I mere ya ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi; I were nsọpuru na nsọpuru kpube ya okpu -eze, 8 na -edobe ihe niile n'okpuru ụkwụ ya. "
Ndị Hibru 4: 15-5: 6, Onye isi nchụàjà ọ bụla a họpụtara ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke
15 n'ihi na anyị enweghị nnukwu onye nchụàjà nke na -enweghị ike imetara anyị ebere n'adịghị ike anyị, kama ọ bụ onye a nwalere n'ihe niile dịka anyị onwe anyị, ma o nweghị mmehie.. 16 Ka anyị were nkwuwa okwu bịaruo ocheeze amara nso, ka anyị wee nweta ebere wee chọta amara inye aka n'oge mkpa. 5: 1 N'ihi na onye isi nchụàjà ọ bụla a họpụtara n'etiti mmadụ ka a họpụtara ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke, ịchụ àjà na àjà maka mmehie. 2 O nwere ike jiri nwayọọ na -emeso ndị na -amaghị ihe na ndị na -enupụ isi ihe, ebe ọ bụ na ya onwe ya na -enwe adịghị ike. 3 N'ihi nke a, iwu ji ya ịchụ àjà maka mmehie nke ya dịka ọ na -achụ maka ndị mmadụ. 4 Ọ dịghịkwa onye na -ewere nsọpụrụ a nye onwe ya, kama ọ bụ naanị mgbe Chineke kpọrọ ya, dịka akpọrọ Erọn. 5 Otú a kwa Kraist ebulighi onwe -ya elu ibu onye -isi -nchu -àjà, ma ọ bụ onye sịrị ya, “Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla m gị”; 6 dika ọ n alsokwu kwa n'ebe ọzọ, si, Gi onwe -gi bu onye -nchu -àjà ebighi -ebi dika usoro Melkizedek si di.
Ndị Hibru 5: 8-10, Chineke họpụtara Jizọs ka ọ bụrụ nnukwu onye nchụàjà
Ọ bụ ezie na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrubeisi site na ahụhụ ọ tara. 9 Ebe emekwara ka o zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, 10 onye Chineke họpụtara ịbụ nnukwu onye nchụàjà dika usoro Melkizedek si dị.
Akwụkwọ Ọrụ Ndịozi kwuru ogologo oge ihe ndị Kraịst họpụtara kwusara banyere onye Jizọs bụ. Akaebe ndịozi Jizọs bụ na “Kraịst bụ Jizọs” (Ọrụ 2:36, Ọrụ 3: 18-20, Ọrụ 5:42, Ọrụ 9: 20-22, Ọrụ 17: 1-3, Ọrụ 18: 5, Ọrụ Ndịozi 18:28) O doro anya na ozizi ndịozi bụ na Jizọs bụ Mesaya (ọ bụghị na ya onwe ya bụ Chineke)
Ọrụ 2: 22-28, Pita na-ekwusa mbilite n'ọnwụ
22 “Ndị Izrel, nụrụ okwu ndị a: Jizọs nke Nazaret, nwoke nke Chineke gbara unu akaebe site n'ịrụ nnukwu ọrụ na ọrụ ebube na ihe iriba ama nke Chineke sitere n'aka ya mee n'etiti unu, dị ka gị onwe gị maara - 23 Jizọs a, nke a raara nye dị ka atụmatụ na amamihe Chineke siri dị, ị kpọgidere n'obe ma gbuo ya site n'aka ndị na -emebi iwu.. 24 Chineke kpọlitere ya, na -atọpụ ihe ụfụ nke ọnwụ, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ijide ya. 25 N'ihi na Devid na -ekwu maka ya, '' Ana m ahụ Onyenwe anyị n'ihu m mgbe niile, n'ihi na ọ nọ n'aka nri m ka m ghara ịma jijiji; 26 ya mere obi m nwere ańụrị, ire m wee n̄ụrịa ọn̄ụ; anụ ahụ m ga -ebikwa na olileanya. 27 N'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ime Hedis, ma ọ bụ mee ka Onye Nsọ gị hụ ire ure. 28 I mewo ka m mara ụzọ ndụ; Ị ga -eme ka m jupụta n'ọ gladụ n'ihu gị. '
Ọrụ 2: 29-36, Pita na-ekwusa, "Chineke mere ya (Jizọs) ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst"
32 Jisus a ka Chineke mere ka O si n'ọnwu bilie, na anyị niile bụ ndị akaebe. 33 Ebe ọ bụ na e buliri ya elu n'aka nri Chineke, mgbe o nataworo nkwa nke Mmụọ Nsọ site n'aka Nna ya, ọ wụpụwo nke a na unu onwe unu na-ahụ ma na-anụ. 34 N'ihi na Devid arịgoghị n'eluigwe, mana ya onwe ya na -asị, '' Onyenwe anyị gwara Onyenwe m, Nọdụ ala n'aka nri m, 35 rue mb͕e M'gēme ka ndi-iro-Gi buru ihe-nb͕akwasi-ukwu-Gi. 36 Ya mere, ka ụlọ Izrel dum mara nke ọma Chineke mere ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst ahụ, Jizọs a nke unu kpọgidere n'obe. "
Ọrụ 3:13, Chineke nyere ohu ya Jizọs otuto
Ọrụ 3: 17-26, Pita na-ekwusa Jizọs Kraịst (Mesaya) nke Chineke
17 Ma ub͕u a, umu-nnam, amataram na unu mere ihe n'amaghi-ama, dika ndi-isi-unu. 18 Ma ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraịst ya ga -ata ahụhụ, o si otu a mezuo. 19 Ya mere, chègharianu, chigharia, ka ehichapu nmehie nile unu, 20 ka oge inye ume wee si n'ihu Onye -nwe bịa, na ka o wee ziga Kraịst họpụtara gị, Jizọs, 21 bụ onye eluigwe ga-enwerịrị ruo mgbe ọ ga-eweghachite ihe niile Chineke kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ ogologo oge gara aga. 22 Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. 23 Ọ gēru kwa, na nkpuru-obi ọ bula nke nāgaghi-ege nti onye-amuma ahu, agēbipu ya n'etiti ndi Israel. 24 Ndi-amuma nile ndi nēkwu okwu, site na Samuel na ndi soro ya, kwusara ubọchi ndia. 25 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ nke Chineke na nna nna unu gbara, na -asị Abraham, 'Na mkpụrụ gị ka a ga -agọzi ezinụlọ niile nke ụwa.' 26 Chineke, ebe O mere ka odibo ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya ka ọ gọzie gị site n'ịtụgharị onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
Ọrụ 5: 30-32, Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta
30 Chineke nna -ayi -hà mere ka Jisus si n'ọnwu bilie, Onye unu onwe -unu b byuru, nākwuba Ya n'elu osisi. 31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya ka ọ bụrụ onye ndu na onye nzọpụta, inye Israel nchegharị na mgbaghara mmehie. 32 Ayi onwe -ayi bu kwa ndi -àmà nke ihe ndia, otú a ka Mọ Nsọ di kwa, nke Chineke nyere ndi n obeyrubere ya isi. "
Ọrụ 5: 42, Ozi izizi nke ndị ozi- “Kraịst (Mezaịa) bụ Jizọs”
Ọrụ 9: 20-22, ozi Sọl ka ọ malitere ikwusa
20 Ngwa ngwa o we kpọsa Jisus n'ulo -nzukọ nile, si,Ọ bụ Ọkpara Chineke. " 21 Ibobo we nwua ndi nile nuru ya n'aru, ha we si, Onye a, Ọ̀ bughi Onye ahu Nke meb thoseuru ndi nākpọku aha nka na Jerusalem? Ọ̀ bụ na ọ bụghị ebe a ka ọ bịara ka ọ kpọta ha n'ihu ndị isi nchụàjà? " 22 Ma Sọl nāga n'iru nādi ike, we me ka ihere me ndi -Ju ndi bi na Damaskọs site n'igosi na Jizọs bụ Kraịst ahụ.
Ọrụ 10: 34-43, Pita kwusaara ndị mba ọzọ ozi ọma
34 Ya mere, Pita mepere ọnụ ya, sị: “N'ezie a ghọtara m na Chineke anaghị ele mmadụ anya n'ihu, 35 ma na mba ọ bụla onye na -atụ egwu ya ma na -eme ezi ihe bụ onye ọ na -anabata nke ọma. 36 Ma okwu ahu nke o zigaara Israel, n preachingzisa ozi ọma nke udo site n'aka Jisus Kraist (ọ bu Onye -nwe ihe nile), 37 unu onwe -unu matara ihe mere na Judia dum, malite na Galili mb thee baptism nke Jọn kwusara siri, 38 ka Chineke si were Mmụọ Nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya. 39 Anyị bụkwa ndị akaebe nke ihe niile o mere ma n'obodo ndị Juu ma na Jerusalem. Ha gburu ya n'osisi n'elu osisi, 40 ma Chineke kpọlitere ya n'ụbọchị nke atọ wee mee ka ọ pụta ìhè, 41 ọ bughi madu nile, kama ọ bu ayi, ndi Chineke rọputara ibu ndi -àmà, ndi soro Ya rie ihe du kwa mb aftere O siri na ndi nwuru anwu bilie. 42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama na ọ bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.. 43 Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara na onye ọ bụla nke kwere na ya na -enweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. "
Ọrụ 13: 36-41, Mgbaghara mmehie site na Kraịst
36 N'ihi na Devid, mgbe o mezusịrị nzube Chineke n'ọgbọ nke ya, ọ dara n'ụra, e wee lie ya n'ebe nna nna ya hà nọ, hụkwa ire ure, 37 ma onye ahụ Chineke mere ka ọ ghara ịhụ ire ure. 38 Ya mere, maranụ, ụmụnna m, na site na nwoke a A na -ekwusara gị mgbaghara mmehie, 39 site kwa n'aka ya onye ọ bụla nke kwere nwere onwe ya pụọ ​​n'ihe ọ bụla iwu Mozis na -enweghị ike ịtọhapụ ya. 40 Ya mere, lezienụ anya ka ihe e kwuru n'akwụkwọ ndị amụma ghara ime: 41 “'Lee, unu ndị na -akwa emo, ka o ju unu anya ma laa n'iyi; n'ihi na ana m arụ ọrụ n'ụbọchị unu, ọrụ nke unu na -agaghị ekwere, ọ bụrụgodị na mmadụ agwa unu ya. '”
Ọrụ 17: 1-3, Nkwusa Pọl na Tesalonaịka
Ma mb whene ha gabigasiri n'Amfipọlis na Apọlonia, ha biaruru Tesalọnaika, ebe ulo -nzukọ nke ndi -Ju di. 2 Pọl wee bata, dị ka ọ na -emekarị, wee soro ha tụgharịa uche n'akwụkwọ nsọ n'ụbọchị izu ike atọ, 3 na -akọwa ma gosipụta nke ahụ ọ dị mkpa na Kraịst ga -ata ahụhụ ma si na ndị nwụrụ anwụ bilie, na ikwu, "Jizọs a, onye m na -ekwusara gị, bụ Kraịst ahụ. "
Ọrụ 17: 30-31, Pọl nọ na Atens
30 Chineke lefuru oge amaghị ama anya, mana ugbu a ọ na -enye mmadụ niile iwu ka ha chegharịa, 31 n'ihi na o wepụtala ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. ”
Ọrụ 18: 5, nkwusa Pọl na Kọrịnt
5 Mgbe Saịlas na Timoti si Masedonia bịa, Pọl nọ na -ekwusi okwu ike, na -agbara ndị Juu àmà na Kraịst bụ Jizọs.
Ọrụ 18:28, ozi Pọl nye ndị Juu
28 n'ihi na ọ katọrọ ndị Juu nke ọma n'ihu ọha, na -egosi site n'Akwụkwọ Nsọ na Kraịst bụ Jizọs.
Ọrụ 26: 15-23, Akaebe Pọl banyere ntọghata ya
15 M'we si, Ì bu onye, ​​Onye -nwe -ayi? Onyenwe anyị wee sị, 'Abụ m Jizọs onye ị na -akpagbu. 16 Ma bilie guzoro n'ụkwụ gị, n'ihi na emeghere m gị anya maka nke a, ịhọpụta gị ka ị bụrụ odibo na onye akaebe maka ihe ị hụworo m na ndị m ga -apụta n'ihu gị, 17 na -anapụta gị n'aka ndị gị nakwa n'aka ndị mba ọzọ — onye m na -eziga gị 18 ka ha meghee anya ha, ka ha wee si n'ọchịchịrị tụgharịa banye n'ìhè na site n'ike Setan chigharịkwuru Chineke, ka ha wee nata mgbaghara mmehie na ebe n'etiti ndị e doro nsọ site n'okwukwe n'ime m.. ' 19 Ya mere, Eze Agripa, anaghị m enupụ isi n'ọhụ nke eluigwe, 20 ma buru ụzọ kwusaara ndị nọ na Damaskọs, mgbe ahụ na Jerusalem na mpaghara Judia niile, nakwa ndị mba ọzọ, ka ha chegharịa wee chigharịkwuru Chineke, na -eme ihe omume na nchegharị ha. 21 N'ihi nke a ndị Juu jidere m n'ụlọ nsọ wee chọọ igbu m. 22 Ruo taa, enwere m enyemaka nke sitere na Chineke, ya mere m ji guzo ebe a na -agbara ma onye nta ma onye ukwu àmà, na -ekwu ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe ndị amụma na Mozis kwuru ga -eme. 23 na Kraist aghaghi ihu ahuhu, na, site n'ịbụ onye mbụ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, ọ ga -ekwusara ma ndị anyị ma ndị mba ọzọ ìhè. "
Amụma Mesaịa nke Agba Ochie (Tanakh) na -akọwa nwa nke mmadụ na -abịa dị ka onye nnọchianya nke Chineke onye Chineke ga -esite na ya guzobe ọkwa nchụ -aja na ala -eze ebighi -ebi. Nkwupụta sitere na English Standard Version (ESV) belụsọ na egosighi n'ụzọ ọzọ.
Deuterọnọmi 18: 15-19, "Chineke ga-eme ka onye amụma biliere gị-aga m etinye okwu m n'ọnụ ya"
15 "TOnye -nwe -ayi Chineke -gi g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti gi, n'etiti umu -nne -gi;- 16 dika unu riọrọ n'aka Jehova, bú Chineke -unu, na Horeb n'ubọchi nkpọkọta ahu, mb saide unu siri, Ka m'ghara inu kwa olu Jehova, bú Chinekem, ọzọ, ka m'ghara ihu ọku uku a ọzọ, ka m'we ghara inwu. 17 Jehova wee sị m, 'Ihe ha kwuru bụ eziokwu. 18 M ga -esi n'etiti ụmụnne ha họpụtara ha onye amụma dị ka gị. M'g puttiye kwa okwum nile n'ọnu -ya, ọ gāgwa kwa ha okwu nile nke M'g commandnye ya n'iwu. 19 Ma onye ọ bụla nke na -agaghị anụ okwu m nke ọ ga -ekwu n'aha m, mụ onwe m ga -ajụ ya.
Abụ Ọma 110: 1-6, “JEHOVA sịrị Onyenwe m”
Na1 Jehova wee sị Onyenwe m: "Nọdụ ala n'aka nri m, Ruo mgbe m ga -eme ndị iro gị ka ihe mgbakwasị ụkwụ gị. " 2 Jehova si na Zaịọn zipụ mkpanaka gị dị ike. Na -achị n'etiti ndị iro gị! 3 Ndị gị ga -eji onwe ha nye onwe ha n'ụbọchị ike gị, n'uwe nsọ; site n'akpa nwa ụtụtụ, igirigi nke ntorobịa gị ga -abụ nke gị. 4 Jehova a swornụwo iyi na ọ gaghị agbanwe obi ya, "Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dika usoro Melkizedek si dị. ” 5 Onyenwe anyị nọ n'aka nri gị; Ọ g willtipia ndi -eze n'ubọchi iwe -Ya. 6 Ọ g willme kwa ihe ekpere n'ikpe n'etiti mba nile, were ozu mejue ha; ọ g willtipia ndi -isi n'elu uwa sara mbara.
Abụ Ọma 8: 4-6, "I nyewo ya ikike ịchị ọrụ aka gị"
4 gịnị bụ mmadụ nke na ị na -echeta ya, na nwa mmadu na ị na -elekọta ya 5 Ma i mere ya ntakịrị ala karịa ndị eluigwe, werekwa ebube na nsọpụrụ kpube ya okpu eze. 6 I nyewo ya ikike ịchị ọrụ aka gị; I doro ihe niile n'okpuru ụkwụ ya,
AB 110 ỌMA 1: XNUMX (YHWH) diri Onye -nwem
ABỤ ỌMA DAVID. Nkwupụta nke YHWH nye Onye -nwem: "Nọdụ ala n'aka nri m, || Ruo mgbe m ga -eme ndị iro gị ka ihe mgbakwasị ụkwụ gị. ”
Aisaia 9: 6-7, "A mụụrụ anyị otu nwa, nye anyị otu nwa nwoke"
6 N'ihi na amuworo anyị otu nwa, nye anyị otu nwa nwoke; ọchịchị ga -adịkwa n'ubu ya, a ga -akpọkwa aha ya Onye Ndụmọdụ Dị Ebube, Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, Nna Ebighị Ebi, Onyeisi Udo. 7 Ịba ụba nke ọchịchị ya na nke udo agaghị enwe njedebe, n'ocheeze Devid na n'elu alaeze ya, ime ka o guzosie ike na ịkwado ya n'ikpe ziri ezi na n'ezi omume malite ugbu a gaa n'ihu. Ekworo Jehova nke ụsụụ ndị agha ga -eme nke a.
Aịsaịa 52:13, “Ohu m ga -eji amamihe mee ihe”
13 Le, odibo m ga -eji amamihe mee ihe; ọ ga -adị elu ma bulie ya elu, a ga -ebulikwa ya elu.
Aịsaịa 53: 10-12, "Site n'ọmụma ya, onye ezi omume, ohu m, ga-eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume"
10 Ma, ọ bụ uche Jehova ka azọpịa ya; o mewo ya ka ọ nwee mwute; mb hise nkpuru -obi -ya n makesweta nso àjà -ikpe, ọ ga -ahụ ụmụ ya; ọ g prolongme ka ubọchi -ya di ogologo; uche Jehova ga -eme nke ọma n'aka ya. 11 Site na nhụjuanya nke mkpụrụ obi ya ka ọ ga -ahụ wee rijuo afọ; site n'ọmụma ya ka onye ezi omume, ohu m, mee ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume, Ya onwe -ya g bearbu kwa ajọ omume nile ha. 12 N'ihi nka ka M'g willkère ya òkè n'etiti ndi bara uba, ya na ndi di ike g dividekè ihe ọ kwatara n'agha; n'ihi na ọ wụpụụrụ mkpụrụ obi ya ọnwụ ewe gua ya na ndi -njehie; ma o buru mmehie nke ọtụtụ, ọ na -arịọkwara ndị na -emebi iwu arịrịọ.
Ndịozi ahụ kpegaara Nna ha ekpere na ime nke a, ha kpọrọ Jizọs "ohu gị dị nsọ Jizọs." Ha ghọtara na Jizọs bụ onye nnọchiteanya nke Chineke.
Ọrụ 4: 24-31, Ndị kwere ekwe na-ekpegara Nna “aha ohu gị dị nsọ Jizọs”
24 … Onye kere eluigwe na ụwa na oke osimiri na ihe niile dị n'ime ha, 25 Onye sitere n'ọnụ nna gị Devid, ohu gị, kwuru site na Mmụọ Nsọ, sị, 'Gịnị mere ndị mba ọzọ ji wee iwe, ndị mmadụ wee na -akpa nkata n'efu? 26 Ndị eze nke ụwa guzoro onwe ha, na ndi -isi zukọrọ imegide Onye -nwe -ayi na imegide Onye -Ya etere manu' - 27 n’ihi na n’ezie n’obodo a, ndị mmadụ zukọrọ megide ohu gị dị nsọ Jizọs, onye i tere mmanụ, ma Herọd na Pọntiọs Paịlet, tinyere ndị mba ọzọ na ndị Izrel., 28 ime ihe ọ bụla aka gị na atụmatụ gị kpebirila ime. 29 Ma ub͕u a, Onye-nwe-ayi, lekwasi okwu-ugha-ha anya, nye kwa ndi-orù-Gi iwu, 30 ka ị na -esetị aka gị ịgwọ ọrịa, a na -eme ihe ịrịba ama na ihe ebube aha ohu gị dị nsọ Jizọs. " 31 Ma mb͕e ha kpesiri ekpere, ebe ahu ebe ha zukọtara nāma jijiji: ha nile we juputa na Mọ Nsọ, nēkwu kwa okwu Chineke n'atụghị egwu.
1 Timoti 2: 5-6, chịkọtara Oziọma ahụ n'otu ahịrịokwu, "N'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ ihe akaebe. nyere n'oge kwesịrị ekwesị. ” Ọ bụ nke a ka Pọl na -akpọ 'ihe ọmụma nke eziokwu' na amaokwu 4 ka Chineke chọrọ ka mmadụ niile bịa wee zọpụta ha. Ọ bụ maka nke a n'amaokwu 7 ka a họpụtara Pọl onye nkwusa na onye ozi, onye nkuzi nke ndị mba ọzọ n'okwukwe na eziokwu.
1 Timoti 2: 3-7 (NIV)
3 Nke a dị mma, ọ dịkwa mma n'anya Chineke Onye Nzọpụta anyị, 4 onye chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha bịarute n'ọmụma nke eziokwu. 5 N'ihi na otu Chineke dị, otu onye ogbugbo dịkwa n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, 6 onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile, nke bụ ọgbụgba ama nyere n'oge ya. 7 Maka nke a ka a họpụtara m ka m bụrụ onye nkwusa na onye ozi (Ana m ekwu eziokwu, anaghị m agha ụgha), onye nkuzi nke ndị mba ọzọ n'okwukwe na eziokwu.
1 Tim 2: 5-6 A haziri ya dịka eziokwu nke Oziọma. Kedu ihe bụ eziokwu a? A chịkọtara ya dị ka ndị a:
Otu Chineke dị (Chineke bụ Onye nzọpụta anyị na -achọ ka a zọpụta mmadụ niile na ka ha bịa mara eziokwu ahụ)
Enwere otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ
Onye ogbugbo bụ nwoke
Onye ogbugbo bụ Kraịst (Mezaịa) Jizọs
Onye ogbugbo nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile
E nyere ọgbụgba -ama nke Mesaịa ahụ na oge ya. (ya bụ, dịka atụmatụ Chineke kara aka siri dị)
Isi ihe niile dị n'elu dị oke mkpa na nghọta anyị nke njirimara Chineke na Jizọs na ọdịiche dị n'etiti ha abụọ. N'ebe a, a na -ama Jizọs na Chineke n'ụzọ anọ:
Jizọs bụ onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ
Jizọs bụ mmadụ
Jizọs nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile
Jizọs bụ Mesaịa nke atụmatụ Chineke
Akụkụ anọ a nke onye Jizọs bụ na -ekwusi ike na mmadụ nke Jizọs bụ isi n'ozi ozioma. N'ikwekọ n'ụkpụrụ ndị a, Jizọs enweghị ike ịbụ Chineke n'echiche nke onlogical:
1. Onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ bụ nnọkọ dị iche na Chukwu na ndị ọ na -agbachitere. Nke ahụ bụ onye ogbugbo bụ onye nke atọ. Enwere naanị otu Chineke, yabụ onye ogbugbo n'etiti Chineke ga -enwerịrị ihe dị iche n'ihe gbasara onyonyo na Chineke.
2. Onye ogbugbo bu nwoke. Chineke abụghị ma enweghị ike ịbụ mmadụ. Chukwu enweghi ngwụcha, mmadụ nwere oke. The enweghi ngwụcha nwere ike ịbụ oke na anọgide enweghi ngwụcha. Mmadụ na -adabere na ikuku oxygen, nri na mmiri. Chineke dabere n'ihe ọ bụla. Mmadụ na -anwụ anwụ ebe Chineke anaghị anwụ anwụ. Chineke nke na -adịghị anwụ anwụ enweghị ike ịnwụ site na nkọwa. Nhazi nke Chineke na mmadụ bụ nkewa nke enweghị ike ịgabiga.
3. Onye ogbugbo nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile. Chineke enweghị ike inye onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta dịka Chineke anaghị agbanwe agbanwe enweghị ike ịnwụ anwụ. Kama nke ahụ, ọ dị mkpa na ọgwụgwọ maka mmehie nke mmadụ ga -abụ ụdị nke Adam - nwoke nke emere n'oyiyi nke Adam mbụ - ihe okike nke Chineke mere na -enweghị mmehie.
4. Onye ogbugbo bụ Mesaịa (Kraịst) nke atụmatụ Chineke nke ndị amụma buru n'amụma. Mesaịa nke amụma bụ onye nnọchite anya mmadụ nke Chineke - “Nwa nke mmadụ”
Omume mmadụ nke Kraịst dị mkpa maka ozi ọma dịka egosiri na njikọ dị n'okpuru. Chineke abụghị mmadụ mana Mesaịa nke amụma bụ onye na -ejere Chineke ozi nke mmadụ - onye e tere mmanụ dị ka Jizọs bụ Nwa nke mmadụ nke amụma amụma. Adam bụ ihe atụ nke onye gaje ịbịa na Jizọs bụ Adam ikpeazụ. Aja mgbaghara mmehie bụ site na arụ na ọbara nke Mesaịa nke mmadụ (Kraịst). Jizọs, onye isi nchụàjà anyị na -agba ọgbụgba ndụ ka mma n'ọbara nke ya. Jizọs bụ ohu Chineke nke na -ekpechite ọnụ anyị. Otu Chineke na Nna bụ Chineke na Nna Jizọs. Chineke onye nzọpụta anyị buliri Jizọs elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta. A kara Ọkpara nke mmadụ ikpe ụwa ikpe n'ezi omume.
Otu Onye Ogbugbo - Mkpa mmadụ dị mkpa nke otu onye ogbugbo Jizọs Kraịst
A na -akpọ ndị nnọchi anya Chineke. A pụrụ ịkpọ Jizọs Chineke n'ihi na ọ na -anọchite anya Chineke.
N'echiche Hibru, ihe mbụ na -akpata ma ọ bụ ihe kpatara ya anaghị abụkarị ihe dị iche na nke abụọ. Nke ahụ bụ ịsị, onye isi ụlọ ọrụ anaghị egosipụta nke ọma mgbe niile n'ụdị onye nnọchi anya (onye enyere ikike ime ihe n'aha onye ọzọ). Mgbe ụfọdụ, a na -emeso onye nnọchi anya na -anọchite anya onye isi ụlọ akwụkwọ dịka a ga -asị na ọ bụ ya bụ onye isi, n'agbanyeghị na nke a abụghị n'ụzọ nkịtị. Onye isi na onye nnọchi anya ka bụ mmadụ abụọ dị iche. Onye nnọchite anya na -arụ ọrụ ma na -ekwuchitere onye isi ụlọ akwụkwọ bụ onye nnọchi anya (onye enyere ikike ime ihe maka onye ọzọ).
Okwu Hibru maka onye nnọchi anya ma ọ bụ onye nnọchi anya iwu bụ Shaliach nke yiri ụwa Gris Ndịozi na okwu bekee bụ Apostle. Onye ozi bụ onye nnọchi anya onye isi ọrụ nyere ya ọrụ. Anyị na-agụ na Ndị Hibru 3: 1-2, Jizọs bụ onye ozi na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị wee bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi nye onye họpụtara ya, dịka Mosis kwesịkwara ntụkwasị obi n'ụlọ Chineke niile.
gị n'ụlọnga, Encyclopedia of the Jewish Religion, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, p. 15.
Onye nnọchite anya (Hibru. Shaliach); Egosipụtara isi okwu nke iwu ndị Juu nke ụlọ ọrụ na dictum, “a na -ahụta onye nnọchi anya mmadụ dị ka onye ahụ n'onwe ya” (Ned. 72B; Kidd, 41b) Ya mere, omume ọ bụla nke onye nnọchi anya ahọpụtara nke ọma mere ka a na -ewere na ọ bụ nke onye isi ụlọ akwụkwọ mere, yabụ na -ebu ọrụ zuru oke maka ya.
Ụlọ ọrụ nke Akwụkwọ Nsọ - Ịghọta Iwu Nlekọta - Echiche dị mkpa nke Akwụkwọ Nsọ gbasara Kraịst
Isi ihe ga-enyere aka ịghọta ihe gbara amaokwu nke Jọn 14; 9-10 bụ John 14; 20 ebe Jizọs kwuru, “n'ụbọchị ahụ ka unu ga-amara na anọ m n'ime Nna m, na unu nọkwa n'ime m, na mụ onwe m dị n'ime gị.”
John 14; 9-10, 20, "Onye hụrụ m ahụla Nna m"
9 Jizọs sịrị ya, “Mụ na gị anọwo ogologo oge a, ma ị mabeghị m, Filip? Onye hụrụ m ahụla Nna m. Olee otu ị ga -esi kwuo, 'Gosi anyị Nna ahụ'? Ọ bụ na unu ekweghị na m nọ n'ime Nna na Nna nọkwa n'ime m.
Ịnọ na Nna apụtaghị n'ezie ịbụ Nna. Jizọs ga -anọ n'ime anyị, anyị ga -anọkwa na Jizọs, nke ahụ anaghị eme ka anyị bụrụ Jizọs.
Ya mere, o doro anya na ọ bụghị n'ụzọ nkịtị mgbe Jizọs kwuru, "Onye hụrụ m ahụla Nna m."
Jizọs Bụ Ihe Nlereanya - Ịghọta ka Jizọs si bụrụ ihe nlereanya nye anyị
Abụ m Nkwupụta -Ịghọta ka Jizọs siri kọwaa onwe ya n'ime Oziọma
Ịghọta Logos - Ezi ihe Okwu pụtara na okwu mmalite nke Jọn
Otu Chukwu Otu Onyenweanyi - Maka anyị enwere otu Chukwu, Nna, na otu Onyenwe anyị, Jizọs Kraịst
Didie ke Jesus ye Ete ẹdi ntiense iba? (Jọn 8: 16-18)
Jizọs mụtara nrubeisi. Gịnị mere Chineke ga -eji chọọ ịmụ nrubeisi? (Ndị Hibru 5: 8)
Ọ bụrụ na Jizọs n'onwe ya bụ Nna, ọ gaghị abụ ihe efu ịsị "Edebewo m ihe Nna m nyere n'iwu wee nọrọ n'ịhụnanya ya." (Jọn 15:10)
Chineke ọ na -ebuli onwe ya elu dị ka odibo? (Ọrụ 3:26)
Ọ dị Chineke mkpa inyefe onwe ya n'onwe ya dị ka a sịrị na ọ 'nọgidere na -enyefe onwe ya n'aka onye na -ekpe ikpe ziri ezi'? (1 Pita 2:23)
Chineke o buliri Kraịst elu nke ukwuu wee nye ya aha nke karịrị aha niile n'ihi na o rubere isi nye onwe ya? (Ndị Filipaị 2: 8-9)
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ikwu na Chineke buliri onwe ya elu? (Filip 2: 9, Efe 1: 17-21)
Nnukwu onye nchụàjà na -arụ ọrụ n'aha Chineke n'ihe metụtara mmadụ, yabụ kedu ka Chineke si họpụta onwe ya nnukwu onye nchụàjà? (Ndị Hibru 5: 8-10)
Ọ bụrụ na Jizọs bụbu Chineke na idobe ihe niile n'okpuru Chineke, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịsị "Chineke edenyela ihe niile n'okpuru ụkwụ ya"? (1 Ndị Kọrịnt 15: 24-27)
Ọ bụrụ na Kraịst bụ Chineke, olee otú a ga -esi kwuo na Kraịst abanyela '' n'eluigwe n'onwe ya ugbu a ka ọ pụta n'ihu Chineke n'aha anyị ''? (Ndị Hibru 9:24) Chineke ọ gara eluigwe ịpụta n'ihu Chineke?
Gịnị mere Jizọs ji kwuo ọtụtụ ugboro na ya na -agakwuru Nna ma ọ bụrụ na ọ bụ Nna ya? (Jọn 14:12, Jọn 14:28, Jọn 16:17, Jọn 16:28)
Kedu ka a ga -esi nwaa Chineke n'ụzọ ọ bụla anyị bụ nakwa meere anyị ebere n'adịghị ike anyị? (Ndị Hibru 4:15)
Chineke kụziiri Jizọs ihe. Ọ dị mkpa ka Chineke mụta ihe ọ bụla? (Jọn 8:28)
Ọ bụrụ na Jizọs, bụ Chineke, ọ ga -enwe mmụọ nsọ n'ime onwe ya. Ya mere, kama isi n'eluigwe rịdata wee binyere ya, ọ́ gaghị esi na ya pụta? (Luk 3:22)
Ọ bụrụ na Jizọs bụ Chineke n'onwe ya, gịnị kpatara na ọ ga -adị mkpa ka mmụọ ozi gbaa ya ume? (Luk 22: 42-43)
Chineke adịghị mkpa ite onwe ya mmanụ. Gịnị kpatara na ọ ga -adị mkpa ka Chineke jiri mmụọ nsọ tee Jizọs mmanụ? (Luk 4:18, Ọrụ 4: 26-27, Ọrụ 10:38)
Gịnị kpatara na Jizọs enweghị otuto n'ime onwe ya ma ọ bụrụ na ọ bụ Chineke? (Jọn 8:54)
Ọ bụrụ na Jizọs n'onwe ya bụ Nna, gịnị ka ọ pụtara ikwu na Nna hụrụ Jizọs n'anya n'ihi na ọ tọgbọrọ ndụ ya? (Jọn 10:17)
Jizọs kwuru na Nna karịrị ihe niile. Ntak m notdọhọke ke enye okpon akan kpukpru? (Jọn 10:29, Jọn 14:28)
N'ihi gịnị ka Jizọs ji kwuo na Nna ahụ bụ nanị ezi Chineke ahụ nakwa na ya onwe ya bụ onye ahụ o zitere? (Jọn 17: 1-3)
Gịnị mere Jizọs ji kpọọ Chineke dịka Chineke na Nna ya ma ọ bụrụ na ya onwe ya bụ Nna? (Jọn 20:17)
Kedu ihe kpatara eji kpọọ Nna ahụ otu Chineke na isi iyi nke ihe niile ebe Jizọs kpọrọ ya otu Onyenwe anyị (dịka ọdịiche dị n'etiti ya na Chineke) na 1 Ndị Kọrịnt 8: 5-6?
Peter kwuru na Chineke mere Jizọs ka ọ bụrụ Onyenwe anyị na Kraịst. Nke a enwere ezi uche ma ọ bụrụ na Jizọs bụ Onyenwe anyị ịmalite? (Ọrụ 2:36)
Ọ bụrụ na Jizọs bụ Chukwu, gịnị kpatara na ọ sịghị na Jizọs nyere onwe ya dịka uche ya si dị, karịa uche nke Chineke na Nna anyị (Gal 1: 3-4)
N'ịdị iche na Chineke, a na-akpọ Jizọs dịka nwoke nke bụ otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ na 1 Tim 2: 5-6. Kedu ka Chineke ga -esi bụrụ ma onye ogbugbo na Chineke ọ na -agbachitere?
Gịnị mere Pọl ji sị “ka Chineke na Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụrụ onye a gọziri agọzi” kama ‘ka a gọzie Chineke na Nna anyị bụ́ Jizọs Kraịst’? (2 Ndị Kọrịnt 1: 3)
Ọtụtụ ndị kwere ekwe n'otu n'otu n'oge gara aga achọpụtala na ozizi ahụ ekwekọghị n'ịgba ama ama ama nke akwụkwọ nsọ. Ha achọpụtala na amaokwu ole na ole na -edochaghị anya na -akwado ozizi ahụ mgbe a tụgharịrị ya n'ụzọ. Otú ọ dị, a na -akwado nghọta otu n'otu ebe niile n'ime Agba Ọhụrụ yana ntụaka kacha doo anya. Isi ihe dị n'etiti ndị kwere ekwe n'otu bụ idobe chi nke Kraịst. Mana mgbe anyị nyochachara nke ọma, ọ nweghị ebe Agba Ọhụrụ na -egosi na anyị ga -ekwere na Jizọs bụ otu Chineke na Nna. Kama anyị na -ahụ ya dị ka Mesaịa nke mmadụ nke Chineke mere Onyenwe ya na Kraịst.
Ndozigharị narị afọ nke 21 nwere webụsaịtị a na -eduzi kpọmkwem maka ndị nwere nzụlite nke ịdị n'otu. Ndị mepụtara saịtị a bụ ndị sikwa n'otu nzụlite.
Ndozigharị narị afọ nke 21